မှုခင်းသတင်း – Page 2
ကျောင်းအုပ်ဆရာမ တဦးကို TNLA တပ်ဖွဲ့ဝင် ၂ ဦး အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြစ်
October 26, 2017 myanmarnine Leaveacommentမှုခင်းသတင်း
By နန်းလွင်နှင်းပွင့် 26 October 2017 Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ ကျောက်မဲမြို့နယ် မန်ခေါက်ကျေးရွာရှိ အခြေခံပညာ အလယ်တန်းကျောင်းမှ ကျောင်းအုပ် ဆရာမ တဦးကို ပလောင် (တအာင်း) အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (TNLA) မှ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၂ ဦးက ဖမ်းဆီး၍ အဓမ္မပြုကျင့်ပြီး နေအိမ်မှ လက်ကိုင်ဖုန်း၂ လုံး ကိုလည်း ယူသွားသည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။ TNLA ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဗိုလ်မှူးချုပ် တာဘုန်းကျော် က “ကျူးလွန်သွားတဲ့ ရဲဘော်တွေက ကျနော်တို့ လူဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ရဲဘော်ဖြစ်တယ်။ သူတို့ကို […]
ကျောက်တံခါး အောက်တိုဘာ ၂၆ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်တံခါးမြို့နယ်၊ ဖဒိုနယ်မြေရဲစခန်းအပိုင်၊ ဘိုပိုက်ဆံ(၂)ရပ်ကွက်၊ မင်းကျောင်းကျောင်းတိုက်တွင် အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက် က ကျောင်းတိုင်းဆရာတော်သတင်းသုံးသည့် အခန်းအတွင်းထည့်ထားသည့် အလှူခံရရှိ ငွေ ကျပ်သိန်း(၅၀)ပျောက်ဆုံးသွားသဖြင့် စခန်းသို့တိုင်ကြားခဲ့ရာ စခန်းမှ(ပ)၅၅၉/၂၀၁၇ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၈၀ဖြင့် အမှုဖွင့်ကာ တရားခံအား စုံစမ်းဖော်ထုတ် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ထိုသို့ စုံစမ်းဖော်ထုတ်စစ်ဆေးရာတွင် ဖဒိုနယ်မြေရဲစခန်းမှ စခန်းမှူးရဲအုပ်ရဲထွဋ်ကိုသည် ပဲခူးခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးဒုရဲမှူးကြီးစိန်မင်ထံမှ ညွှန်ကြားချက်များရယူကာ ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ဝင်ထွက်သွားလာသူများ ထဲမှ မသင်္ကာသူ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ဝေယျာဝေစ္စ ပြုလုပ်သူများထဲမှ နိုင်ထက်လင်း(၁၄)နှစ်၊(ဘ)ဦးလဲပွယ်မှူး၊ဘိုပိုက်ဆံ (၂) ရပ်ကွက်၊ ဖဒိုမြို့နေသူသည် ဖုန်းအရောင်းဆိုင်တစ်ခုတွင် ဖုန်းတစ်လုံးအား (၂)သိန်းကျပ်ဖြင့် ၀ယ်ယူသွားကြောင်းသိရှိရသဖြင့် စစ်ဆေးမေးမြန်း ရာ နိုင်ထက်လင်းမှာ(၁၈.၁၀.၂၀၁၇)နေ့ နံနက်(၈)နာရီအချိန်က ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးအိပ်ခန်းအတွင်းသို့ အနောက်တံခါးမှ ခိုးဝင်ပြီး […]
တောင်ကြီးမြို့ရှိ လုံဝမ်ရွှေဆိုင်တွင် သေနတ်အတုဖြင့် လုယက်မှုဖြစ်ပွား၊ နောက်ဆက်တွဲ သတင်း .
တောင်ကြီးမြို့ရှိ လုံဝမ်ရွှေဆိုင်တွင် သေနတ်အတုဖြင့် လုယက်မှုဖြစ်ပွား၊ နောက်ဆက်တွဲ သတင်း ………. ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ရေထွက်ဦးလမ်း(City Square ၏ မြောက်ဘက်)ရှိ လုံဝမ်ရွှေဆိုင်တွင် ယနေ့ အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်၊ နေ့လည် ၁၁ နာရီခန့်က အမည်မသိ အမျိုးသားတစ်ဦးမှ သေနတ်အတုဖြင့် လုယက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၄င်း တရားခံကို ဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။ . အမည်မသိ အသက် ၂၀ အရွယ်ခန့် အမျိုးသားတစ်ဦးမှ ရွှေ သိန်း ၂၀၀ ဖိုးခန့် ၀ယ်ယူမည်ဟုဆိုကာ လုံဝမ်ရွှေဆိုင်အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာပြီး အသင့်ပါလာသော အဖြူရောင်ပလပ်စတစ် လက်ဆွဲအိတ်အတွင်းမှ သေနတ်အတုကိုထုတ်၍ ရွှေဆွဲကြိုး၊ လက်စွပ်နှင့် လက်ကောက်များကို လုယူထွက်ပြေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းကဲ့သို့ […]
ဖုန်းအသစ်​တစ်​လုံးဝယ်​​ပေးမည်​ဟုပြောပြီး အသက်၁၁နှစ်အရွယ်မိန်းကလေး မုဒိမ်းကျင့်ခံရ
မုဒုံမြို့နယ်​ ၊ မှိန်​ကနိမ်း​ကျေးရွာအုပ်​စု ​ကော့လှ​ကျေးရွာ​နေ ဦး​မောင်​ဦး၏ ခြံတွင်​ စာရင်းငှါးလုပ်​ကိုင်​သူ ကတုံး(ခ)ဝင်းကြိုင်​ (၄၂) နှစ်​ (ဘ)ဦး​သောင်းကြည်​ မှတ်​ပုံတင်​အမှတ်​ – ၇/ သနပ(နိုင်​) ၀၇၈၆၀၇ ( ဇာတိ👉 ထပ်​ခနင်း ကံကုန်း​ကျေးရွာ ၊ သနပ်​ပင်​မြို့နယ်​ ပဲခူတိုင်း ) သည်​ မိမိ၏အနီးနား၌ ကျပန်းလုပ်​ကိုင်​စား​သောက်​​နေ​သော ဧရာဝတီတိုင်း ၊ ကျုံ​ပျော်​မြို့နယ်​ ၊……..​ကျေးရွာမှ ဦး လှ နှင့်​ ​ဒေါ် မြ တို့၏သမီးကြီး မ​အေး​အေး အသက်​ ( ၁၁) နှစ်​အား ၂၅.၁၀.၂၀၁၇ ရက်​​နေ့ ​နေ့လည်​ ၁ နာရီခန့်​တွင်​ မိဘ နှစ်​ပါးမသိရှိပဲ ဖုန်းပြင်​​ပေးမည်​ဟုဆိုကာ အိမ်​မှ ​ခေါ်ထုတ်​သွားခဲ့ပါသည်​ ။ ထိုမှတစ်​​ဆင့်​ […]
မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့မရဲစခန်းမှ အချုပ်သား ၁၀ ဦး ထွက်ပြေးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ လပွတ္တာခရိုင် ရဲမှူးအပါအ၀င် ရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများအား ရဲတရားရုံးဖွဲ့စစ်ဆေး
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လပွတ္တာခရိုင် မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့မရဲစခန်းမှ အချုပ်သား ၁၀ ဦး ထွက်ပြေးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ လပွတ္တာခရိုင် ရဲမှူးအပါအ၀င် ရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့အား ရဲတရားရုံးဖွဲ့ စစ်ဆေးထားကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိတွင် ရဲတရားရုံးမှ ဆုံးဖြတ်ထားသည့် ပြစ်ဒဏ်ကို အတည်ပြုပေးနိုင်ရန် ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်ထံ တင်ပြထားကြောင်း ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ပြောရေးဆို ခွင့်ရှိသူက အတည်ပြုပြောကြားသည်။ “စစ်ဆေးထားတယ်။ ပြစ်ဒဏ်ကို နရခ က အတည်ပြုရတာ။ အဲဒါ စောင့်နေတာ။ ပထမတော့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးပေါ့။ ပြီးရင် သက်သေခံ အကျဉ်းချုပ်ရေးမှတ်ယူတာပေါ့။ အဲဒါပြီးတော့မှ ရဲတရားရုံးစစ်တာပေါ့။ အဆင့်ဆင့်တော့ လုပ်ရတာပေါ့” ဟု ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဒုရဲမှူးကြီး ခင်မောင်လတ်က ပြောကြားသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ လပွတ္တာခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးနှင့် မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ် […]
October 24, 2017 myanmarnine Leaveacommentမှုခင်းသတင်း
မုံရွာမှမန္တလေးဖက်သို့ ဆေးခန်းမန်နေဂျာမောင်း၍ ဆေးခန်းဆရာဝန်လိုက်ပါလာ သော မာဇဒါ-2 ကားကိုသ တင်းအရ မုံရွာတိုးလ်ဂိတ်တွင် တာဝန်ရှိ ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကရပ်တန့် စစ်ဆေးရာစိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးအပြား၂၀ကို ကနဦးမိပြီး စစ်ဆေးရာဆေးခန်းမှ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေး ၉၅ပြား ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိမှု အောက်တိုဘာလ၂၃ရက်နံနက် အစောပိုင်း၂နာရီခွဲခန့်က ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မုံရွာမြို့ ပါရဂူဆေးခန်းမန်နေဂျာရဲဝင်းနိုင်မောင်းပြီး ပါရဂူဆေးခန်းဆရာဝန်ဒေါက်တာအောင်အောင်ဖြိုး(ခ)ညီထွေး လိုက်ပါလာသော မာဇဒါ-2အနီရောင်ကားကို မုံရွာတိုးလ်ဂိတ်တွင် သတင်းအရစောင့်ဆိုင်းရပ်တန့်စစ်ဆေးရာ ယာဉ်မောင်းတံခါးလက်ကိုင်ခွက်အတွင်းမှ 88နှင့်1 စာတမ်းပါ ပန်းရောင်စိတ်ကြွဆေး၁ပြား ဂက်စ်မီးခြစ်တစ်လုံး ဒေါက်တာအောင်အောင်ဖြိုးလွယ်ထားသော လွယ်အိတ်အတွင်းမှ ပလတ်စတစ်ဗူးဖြင့်ထည့်ထားသည့် 88နှင့်1စာတမ်းပါ ပန်းရောင်စိတ်ကြွဆေး ၁၉ပြား ခဲစက္ကူအပိုင်း၂ခု ပိုက်ဆံအိတ်အတွင်းမှ ငွေစက္ကူရောရာ ကျပ် ၄၂၄၂၀၀ကို ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း သိရသည်။ ဆက်လက်စစ်ဆေးရာ မုံရွာမြို့သလ္လာရပ်ကွက်ရှိ ပါရဂူဆေးခန်း တွင် စိတ်ကြွဆေးများ ကျန်သေးကြောင်းသိရ၍ မူးယစ်တပ်ဖွဲ့စုမှုး၏ […]
October 23, 2017 myanmarnine Leaveacommentမှုခင်းသတင်း
သမီးအရင်းဖြစ်သူအား အကြိမ်ကြိမ်မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့ပြီး အခြားသူများထံမှလည်း ငွေယူကာ ကာမဆက်ဆံခိုင်းသည့် ဖခင်ဖြစ်သူအား မုံရွာခရိုင်တရားရုံးတွင် စစ်ဆေးနေ မုံရွာမြို့ အလုံရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သော သိန်းလွင်(အသက် ၄၀နှစ်)သည် အသက် (၁၂)နှစ်အရွယ်ရှိ မိမိ၏ သမီးအရင်းဖြစ်သူအား ညစဉ်နီးပါး မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့ပြီး ယောက်ဖနှင့်တကွ အခြားသူများထံမှလည်း ငွေယူကာ သမီးအရင်းဖြစ်သူအား ကာမဆက်ခံခိုင်းသည့် သက်ငယ်မုဒိမ်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ယခုအခါ မုံရွာခရိုင်တရားရုံးတွင် ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၇၆ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားပြီး အမှုအမှတ် (၂၉/၂၀၁၇)ဖြင့် ရုံးတင် စစ်ဆေးနေကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ အလုံရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်ပြီး ကျပန်းအလုပ်လုပ်ကိုင်သူ သိန်းလွင်သည် ပထမဇနီး ဒေါ်မြင့်မြင့်စိန်နှင့် သမီးတစ်ယောက် သားတစ်ယောက် ထွန်းကားခဲ့သည်။ ထို့နောက် အဆိုပါသိန်းလွင်သည် မယားငယ်ယူပြီး မယားငယ်ကိုပါ အိမ်ပေါ်အထိ တင်ထားကာ ပေါင်းသင်းနေခဲ့သည်။ […]
မြောက်ဒဂုံတွင် ချစ်သူအမျိုးသမီးကို အိမ်သော့ခတ်ပြီး မီးရှို့သတ်မှုဖြစ်ပွား
ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ၅၁ ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်နောင် (၂) လမ်းရှိ နေအိမ်တစ်လုံးတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ၎င်း၏ချစ်သူ အမျိုးသားက မီးရှို့သတ်ခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။ အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက် နံနက် ၁ နာရီဝန်းကျင်က ဘုရင့်နောင် (၂) လမ်းတွင် နေအိမ်တံခါး အပြင်မှ သော့ခတ်ထားသည့် အိမ်အတွင်း မီးလောင်နေသောကြောင့် ရပ်ကွက်နေသူများက တံခါးရိုက်ချိုးဖျက်စီးကာ မီးဝိုင်းငြှိမ်းသတ်ခဲ့သည်။ ယင်းနောက် မီးငြိမ်းသွားသည့်နေအိမ်ထဲ ရဲတပ်ဖွဲ့က ဝင်စစ်ဆေးရာ အိပ်ခန်းထဲတွင် ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းကို ပုဆိုးစဖြင့်ပတ်ထားပြီး မီးလောင်ဒဏ်ရာများနှင့် သေဆုံးနေသော အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီး၏ ရုပ်အလောင်းကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ သေဆုံးသူ အမျိုးသမီးမှာ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး မီးလောင်သည့် နေအိမ်ကို […]
ဈေးဆိုင်အမွေခွဲရာမှ သမီးယောက်ဖချင်း စကားများပြီး ဓားထိုးမှုဖြစ်
ဈေးဆိုင်ကိစ္စအမွေခွဲ ရာမှ သမီးယောက်ဖနှစ်ဦးစကား များရန်ဖြစ်ပြီး လူသတ်မှုဖြစ်စဉ် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ သည်။ စမ်းကြီးဝရပ်ကွက်တွင်တစ် အိမ်တည်း အတူနေသူလှဝင်းနှင့် ယောက်ဖဖြစ်သူ လှသန်းတို့ အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက် နေ့လယ် က စကားများရန်ဖြစ်ပြီး လှဝင်းက လှသန်းကို စတီးဓားဖြင့် ထိုးသတ်ခဲ့ကြောင်း မင်္ဂလာဒုံရဲစခန်းမှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြော သည်။ ‘‘ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ ခဏ ခဏစကားများရန်ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခုလည်း အမွေ ကိစ္စစကားများပြီးရန်ဖြစ်ရာကနေ ဓားထိုးမှုဖြစ်တယ်။ ဓားနဲ့ထိုးတဲ့ သူကိုလည်း ဖမ်းမိထားပါတယ်’’ ဟု မြောက်ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲ အရာရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။ ဓားဖြင့်ထိုးသတ်ခံရသူ အ သက်(၄၂)နှစ်အရွယ် လှသန်း တွင် လည်ပင်းနှင့်ဦးခေါင်း၌ ပြတ်ရှဒဏ်ရာများရရှိပြီး ချိုင်း အောက်တွင် […]